ပျော်ရွှင်စရာ ဒီချိန်ခါ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ပျော်ရွှင်စရာ ဒီချိန်ခါ
Posted by ရာဇ၀င်လူဆိုး on Oct 12, 2011 in Copy/Paste | 12 comments
သီတင်းကျွတ်ပြီဆိုတာနဲ. ဗျောက်အိုးသံ တစ်ဒိုင်းဒိုင်း ကြာနေရတော. နှလုံးရောဂါတောင် ရသွားနိုင်ရဲ.။ သီတင်းကျွတ်နဲ. ဗျောက်အိုး၊ မီးပန်း ကခွဲမရတဲ. ယဉ်ကျေးမှုလိုဖြစ်နေတာပါ။ ဗမာတွေ အပျော်အပါးမက်လွန်းလို. ဆယ့်နှစ်လရာသီ ပွဲတော်များဆိုပြီး လတိုင်းပွဲတော်တွေရှိနေတာ ကျုပ်တို့တိုင်းပြည်ပဲ ရှိတယ်နော။ ဒါပေမယ့်ဗမာဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ ရိုး၇ာပွဲတော်တွေရောက်ရင် မနေနိုင်မထိုင်နိုင် ပျော်မိတာပါပဲ (သင်္ကြန် ဆိုပိုဆိုးပေါ.)။ ခုလိုသီတင်းကျွတ်ဆိုရင်လဲ ဆီမီးပူဇော်၊ အလှူအတန်းတွေလုပ်၊ လူကြီးသူမ ဆရာသမားတွေကို ကန်တော. (ပြီးရင်မုန့်ဖိုးတောင်း)။ ငယ်ငယ်ကဘ၀ကတော. ပျော်စရာအတိပဲ။ အဲ..ပြီးတော. ငရဲမီးလွှတ်တာ၊ ဗျောက်အိုးဖောက်တာ ငယ်ငယ်ကသောင်းကျန်းခဲ့တာတွေ..။
ငရဲမီးလွှတ်တာကတော. မြေကျင်းသေးသေးလေးတူး အပေါ်က သတ္တုလိုခွက်လေးထဲမှာ ဖယောင်းတွေဖျော်ထည့် အောက်ကမီးပေးပေါ့ဗျာ။ ခွက်ထဲက ဖယောင်းတွေ ဆူပွက်လာတာနဲ့ ကြိုးစလေးတစ်ခုကို မီးတို.ပြီး ခွက်ထဲကိုထည့် (အပေါ်မီးပေးတာပေါ့)။ ပြီးရင် ခွက်ထဲရေလှမ်းတောက်လိုက်တာနဲ. ရှဲခနဲပဲ မီးတွေထတောက်ရော…သိပ်သဘောကျခဲ့တာ…။ ဒီလိုအဆော.ကောင်းလို့ မီးဟတ်ပြီး မျက်ခုံးတစ်ဖက် ကုန်ခဲ.ဖူးတယ်။
ဗျောက်အိုးဖောက်တာကျတော. ကျုပ်တို ငယ်ငယ်က ဒီလို ရယ်ဒီမိတ်တွေ မရှိခဲ့ဘူးဗျ..။ ဒါပေမယ် ကြံဖန်ပြီး သောင်းကျန်းရတာပေါ့။ သစ်သားမီးခြစ်ဗူးဝယ်။ သစ်သားပေါ်မှာ သံနဲ့အပေါက်လေးဖောက်။ ပြီးရင် မီးခြစ်ဆံခေါင်းလေးတွေကို သစ်သားအပေါက်ထဲကို ချွေထည့်၊ အပေါ်ကနေ မီးခြစ်ဗူးဘေးက ယမ်းစက္ကူသားလေးတွေ အပေါ်ကအုပ်။ ရယ်ဒီဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ သံနဲ့တည်ပြီး တူနဲ့သာထုလိုက်။ ဗြောင်းကနဲ ပဲ။
မီးရှူးမီးပန်းလဲ ဒီလိုဗျ ကြံဖန်လုပ်ရတာပဲ။ မီးခြစ်ကျောက်တွေဝယ် ကျောက်ကို နန်းကြိုးလေးနဲ. ချည်ပြီး မီးသာ၇ှို.လိုက် ။ ကျောက်လေးရဲလာပြီဆိုရင် လက်နဲ့တောက်လိုက်တာနဲ့ မီးတွေဖွားကနဲပဲ။ ဒီလိုနဲ့နည်မျိုးစုံ ကြံဖန်ပြီး hand made ပစ္စည်းတွေနဲ့ ငယ်ငယ်က သောင်းကျန်းခဲ့ရတာ။ သီတင်းကျွတ် နဲ့ ဗျောက်အိုးဖောက်တယ်ဆိုတာ ခွဲမရတဲ. ယဉ်ကျေးမှုလိုဖြစ်နေတာပါ။ ဒီနှစ်သီတင်းကျွတ်တော. ပိုထူးခြားတယ်လို. ကျုပ်ထင်တယ်… ဘာကြောင့်လဲဆိုတော. တီဗီမှာ ဗျောက်အိုးဖောက်ရင် အရေးယူမယ်ဆိုတဲ. ကြေငြာချက်တွေ မတွေ.ရတော.တဲ့အပြင် ဧရာဝတီမြစ်ဆုံ စီမံကိန်းလဲရပ်္စ၊ အကျဉ်းသားတွေလဲ လွှတ်ပေးတဲ. ဒီသီတင်းကျွတ်ဟာ ကျက်သရေ မင်္ဂလာ ပိုရှိသွားတာပေါ့ဗျာ..။ ဒီလို ၀မ်းသာစရာ ဖြစ်ရပ်တွေနဲ. ဖြတ်သန်း၇မယ် ဒီလို သီတင်းကျွတ်မျိုးကို ကျုပ်တို့ရွာကလဲ ဗျောက်အိုးတွေဖောက်ပြီး သီတင်းကျွတ် လပြည့်ညကို အသက်သွင်းလိုက်ရအောင်… ကဲ ပြောနေကြာတယ်….
(လပြည်.နေ့တစ်ရက် အရက်ရှောင်ထားသောကြောင်. ရေသောက်မူးနေသော မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု၏ အသံ)
“ ကိုကို ကယ်ပါ..ကိုကို ကယ်ပါ”
(လပြည့်နေတွင် လျှောက်လည်ပြီး ပြန်လာသော ရွာထဲမှ အပျိုကြီး မမ များ၏ အားကိုတကြီးအော်သံ)
ထိုအချိန်တွင် ရွာထဲမှာ ကိုကို ကာလသားများ၏ သီချင်းသံသဲ့သဲအာ့း ကြားလိုက်ရပါတော.၏….
“ဒို.ကတော့..ဒို.ကတော့ ….ဒို.ကတော့ မိန်းမ မရရင် ဘုန်းကြီးဝတ်မယ်…….”
(ရွာသူရွာသားအားလုံး ပျော်ရွှင်စရာ သီတင်းကျွတ်ဖြစ်ပါစေလို. ဆုတောင်းရင်း )
ဘုန်းကြီး မ၀တ်ပါရစေနဲ့ဦး ကိုလူဆိုးကြီးရယ်..
အပျိုချော အပျိုကြီးချော တွေရဲ့ ကယ်ပါ အသံလေးကို စောင့်နေချင်သေးလို့ပါ ။
ကိုရင်ပု နဲ့ တွေ့ရင်တော့ ထွက်ပြေးမှာ .. ရစ်နေမယ်စိုးတယ်…
လပြည့်ညဆိုတော့ ပို့တွေတင်တာ နည်းနေတယ်နော်… ကိုကို မမ တို့ရေ ချစ်သူကအရေးကြီးလား ဂေဇက်က အရေးကြီးလား..???? ဟွင်း ဟွင်း ဟွင်း…
ဘုန်းကြီးကျောင်းသွားတာဆိုရင်တော. သာဓု ပါဗျာ…။
ဘုန်းကြီးကျောင်းတော့ ရောက်ပါတယ် … ညနေပိုင်းမှပါ … တနေကုန်တနေခန်း … ကောင်းကောင်း အိပ်စက် အနားယူနေတာပါ
ကြောင်လေးတို့ငယ်ငယ်က စက်ဘီးစမုတ်တိုင်လေးကွေး ၊စမုတ်ခေါင်းကိုအရစ်မှာတစ်ဝက်ပဲရစ်ထားပြီး
ဒါကအကင်းလေးပါ။ ၀ါးပိုးဝါး လေးပေလောက်ကို နောက်ကအဆစ်ပိတ်နှစ်ခုချန်ပြီး ရှေ့ကအဆစ်တွေကို
အပေါက်သေးသေး လက်မ၀က်ပတ်လည်လောက်ဖောက်၊ အဲဒီအပေါက်က ရှေ့က၀ါးလုံးခေါင်းအထိ
ဒိုးယိုပေါက်ပေါ့။ ပြီးတော့မှ အပေါက်ထဲဓါတ်ဆီ နဲနဲထည့်၊ အငွေ့ပျံသွားအောင် လေနဲနဲမှုတ်ပြီး အပေါက်ဝကိုမီးလေးတို့ ပြီး လက်ကလေးနဲ့ပိတ်လိုက်လို့ကတော့ ၀ုန်းးးးးးးးးးး ကနဲ၊ အုန်းးးးးးးးးးးကနဲ အဲဒါကြီးဆိုက်ကားတစ်ယောက်တစ်စီးစီငှားပြီးသူငယ်ချင်းလေးငါးယောက်တမြို့လုံးလှည့်ဖောက်တာ၊
ဟိုတုန်းကဆိုရင် ဟိုဘက်ရပ်ကွက်ဒီဘက်ရပ်ကွက်၊ ဟိုဘက်လမ်းဒီဘက်လမ်းအပြိုင်ဖောက်ကြတာပါ။
အခုနေများအဲလိုလုပ်လို့ကတော့၊ အကိုဇာဂနာတို့၊ အကိုမင်းကိုနိုင်တို့နဲ့အတူတူများနေရမလားပဲ။
(သင်္ကြန်အမြောက်လုပ်နည်းကို ရွာထဲရှိတဲ့အခုလူငယ်တွေမသိမှာစိုးလို့ အရှည်ကြီးရေးပေးလိုက်တာ၊
အရမ်းမဖောက်နဲ့ ဒီကို လာစင်နေတယ်. မျက်လုံကိုလမှန်တေတယ်.
သီတင်းကျွတ်ဗျောက်အိုးလုပ်နည်း၊ သကြန်ရေပြွတ်လုပ်နည်း၊စွန်လုပ်နည်း၊ ဘောင်ဘောင်လုပ်နည်း၊
စကြာရဟတ်လုပ်နည်း၊လေယာဉ်ပျ၊ံလှေစတဲ့ စက္ကူချိုးနည်း၊(အိုရီဂါမီထက်အများကြီးလွယ်တာနော်)၊
ငှက်ကလေးများကိုအလွယ်တကူဖမ်းနည်း၊ပုတ်သင်ညို ပုစဉ်း၊လိပ်ပြာ၊နှင့် ငါးဖမ်းနည်း၊ ဂျင်ပေါက်ခြင်းဆိုင်ရာ
ဂေါ်လီကျောက်ဒိုး၊သားရေကွင်းပစ်ခြင်းဆိုင်ရာ၊ ကျီးသားရိုက်ခြင်းဆိုင်ရာ၊ဂိုးကျဉ်း၊နှင့်တိုင်ထောင်ဂိုး ကန်ခြင်းဆိုင်ရာ၊
ကျောပိုးစီး ဘောလုံးပစ်ခြင်းဆိုင်ရာ၊စည်းကမ်းချက်၊ဝေါဟာရ တွေ ရေးဘို့စာအုပ်တအုပ်လိုတယ်လို့ထင်တယ်။
နောက်ဆို တိန်ကောပျောက်ကွယ်သွားတော့မဲ့ ကလေးတို့ရဲ့ မဟာသမိုင်းတခုနော်။
ဒီဖက်ခေတ် ရန်ကုန်မှာတော့ ဗျောက်အိုးထက် မီးရှုးလွှတ်တာ ပိုအာရုံကျသလားလို့၊ ဗျောက်အိုးက ဖောက်လိုမိရင် ထောင်သုံးနှစ်ဆိုထားတယ် မဟုတ်လား။ တရုတ်က ဝင်တဲ့ မီးရှုးစက္ကူလိပ်တံရှည်တွေနဲ့လေ အိမ်ဝရံတာ၊ ခေါင်မိုးပေါ်တက် ဖောက်ကြတာ။
ဆရာသစ်ရေ လုပ်စမ်းပါဦးဗျ။ ခပ်ငယ်ငယ်ကလေးဘ၀ သောင်းကျန်းခဲ့တာတွေကို ။ တစ်ခုထူးခြားတာက ကလေးတွေသတ်မှတ်တဲ. စည်းကမ်းကို ကလေးတွေကိုယ်တိုင် သေချာလိုက်နာခဲ့ကြတယ်။ ဒါဟာ ကလေးဘ၀ရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုပဲ….ကွာပါ့နော်..ဟဲဟဲ…ဟိုလူကြီးတွေနဲ့…
အိမ်ရှေ့မှာတော့ တော်တော် နားငြီးနေတာ.. အော်.. ပိုက်ဆံ ရှိတဲ့ လူများ ကလေးတွေ ပျော်ဖို့ တော်တော် ကို အကုန်ခံပြီး ၀ယ်ပေးကြတယ် သူတို့ပဲ ဆော့လို့ မပြီး ကို မပြီးနိုင်ကြဘူး။ ကိုယ့်အိမ်ထဲ ခြံထဲ အ၀ ဆော့တာ မဟုတ်ဘူး လမ်းမ ထွက်ပြီး နားပိတ်ပြီး ဆော့ရတယ်လို့ တဖောင်းဖောင်း တဖုံးဖုံးနဲ့ နားတွေလည်း ငြီးနေပြီ.. တီဗွီမှာ တားမြစ်တာ မပါတာကိုပဲ စိတ်မကောင်း ဖြစ်နေတာ..
အိမ်နားမှာလဲ တအုံးအုံး တဒိုင်းဒိုင်းနဲ့ လမ်းသွားရင်လဲ သူတို့ကိုပဲ ကြည့်ရှောင်နေရတယ် …
ပိုက်ဆံကို မီးရှို့တာနဲ့ အတူတူပဲ … အလကား အရည်မရ အဖတ်မရ … သူတို့ကိုကြည့်ပြီး ကိုယ်က ကြားထဲက နှမြောတယ် …
ကိုယ် တော့ သီတင်းကျွတ်မှာ မတော်တရော် တွေ ပဲ..မြင်မိတယ် ။
တခြား ဘာသာ ၀င်တွေ မြင်ရင်…….